မင်္ဂလာဆောင် floristry - အခမ်းအနား၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောနှင့်အရေးပါအခိုက်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အရောင်တွေဟာရင်ခုန်စရာလေထုနူးညံ့ကြင်နာမှု, လတ်ဆတ်ဣတ္ဖြည့်စွတ်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း, အထူးသဖြင့်တစ်ဦးအားလပ်ရက်အပေါ်အမြဲလာဆောင်သတို့သားသတို့သမီးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပန်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တွင် stylist ဖြေရှင်းချက်အမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။ မူရင်းမော်ဒယ်များပုံသဏ္ဍာန်, အရွယ်အစား, အရောင်, ဒါပေမယ့်လည်းအရောင်တွေအမျိုးအစားများ၏ရွေးချယ်မှုထဲမှာမသာကွာခြား။ သင်တန်း၏, လူကြိုက်အများဆုံးအမြဲနှင်းဆီပန်းခဲ့ကြပြီ။ သို့သော်ခေတ်သစ်မိန်းကလေးများ ပို. ပို. ထွက်မတ်တပ်ရပ်နှင့်သူတို့၏မူရင်းအလေးအနက်စဉ်းစားနေကြတယ်ပေးထား, ပန်းဆိုင်လည်းစတိုင်ရေးစပ်သီကုံးပူဇော်နှင့်အခြားအရောင်များနှင့်အတူ။ ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးတွေထဲကနှင်းဆီပန်း၏မင်္ဂလာဆောင်ပန်းစည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်စီးအတွက် Chrysanthemums သတို့သမီး - တစ်ရိုးရှင်းပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာအလွန်ဖြစ်ပါတယ် ဣတ္ တပြင်လုံးကိုလမ်းအတွက်ဖြေရှင်းချက်။ ဤရွေ့ကားပန်းပွင့်လိုက်စားခြင်းနှင့်လည်းသရုပ်ပြထည့်သွင်းစဉ်းစားပေမယ့်သူတို့ရဲ့ brevity နှင့်နူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်အဓိကအာရုံစိုက်ဖြစ်လာကြပါပြီကြသည်မဟုတ်။ ခေတ်သစ်သတို့သမီးအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဤအံ့သြဖွယ်သောအရောင်အဆင်းများ monotonous ဖွဲ့စည်းမှု, ဒါပေမယ့်လည်းဒါခေါ်ဖြတ်တောက်မှုမသာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုနှင်းဆီပန်း၏မင်္ဂလာဆောင်ပန်းစည်းလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကြ၏ဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့?
အဖြူ chrysanthemums ၏မင်္ဂလာဆောင်ပန်းစည်း။ အများဆုံးစတိုင်ထို့အပြင်နူးညံ့သိမ်မွေ့ဣတ္ပုံဂန္အဖြူ၏အဆင်းအရောင်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ပန်းဆိုင်ကိုမကြာခဏအစိမ်းရောင်ပုံစံမျိုးတစ်ဦးအနည်းဆုံးကုန်ကျခြင်းနှင့်နောက်ထပ်အားလပ်ရက်၏ကြော့နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းအလေးပေးထားတဲ့ပုလဲ, sequins, ဖဲဖဲကြိုး၏ပန်းစည်းကိုဖြည့်။
နှင်းဆီပန်းများနှင့် chrysanthemums ၏သတို့သမီးပန်းစည်း။ သင်သည်သင်၏ပုံရိပ်ခြွင်းချက်ခဲ့ချင်ပါကကြက်သွန်နည်းနည်းဂန္မှထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင့်လျော်တဲ့ဖြေရှင်းချက်စုံလင်သောနူးညံ့သိမ်မွေ့ chrysanthemum ပန်းပွင့်နှင့်အတူရောနှောလိမ့်မယ်။ ဖက်ရှင်တစ်ဦး monochromatic pastel အရောင်များအဖြစ်နှင့်အနီရောင်ဘူးသီး၏ပြည့်အဆင်းအရောင်နှင့်မတူဘဲရွေးချယ်မှု, သန္တာ, ကတ္တီပါနီက hue ရပါလိမ့်မယ်။
နှင်းဆီပန်း၏မင်္ဂလာဆောင်ပန်းစည်း။ တစ်ဦးကအခြို့သော asymmetry မူရင်းအားလုံးထုံးစံ add, ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားတစ်ဦးအလွန်ဆင်တူဖောက်ပန်းပွင့်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ Gerberas နှင့် chrysanthemums - ဆောင်းဦးမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုလိမ်းဖြေရှင်းချက်။
မင်္ဂလာဆောင်စားပွဲ၌တစ်စီးအတွက် Chrysanthemums ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပန်းပွင့်ယနေ့မသာဖွဲ့စည်းမှု၏သတို့သမီး, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဖွဲ့လုံးကအခမ်းအနား၏ပန်းအလှဆင်ဘို့လူကြိုက်များကြသည်။ ဒါကြောင့်မကြာခဏ chrysanthemum ပန်းပွင့်စားပွဲပေါ်မှာအလှဆင်, ခန်းမ, မဟာခုနှစ်တွင်ပေးအပ်သည်။
သတို့သမီးဖိနပ် - ခေတ်သစ်ဖက်ရှင်ရဲ့အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များ
မင်္ဂလာဆောင်တွင်ဆင်မြန်း - Trends 2015
အဝလွန် 2014 မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံက
တင့်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံ - တိုင်းအရသာအဘို့အအလှဆုံးဆင်မြန်း၏ 52 ဓါတ်ပုံ
မင်္ဂလာဆောင် Dress "ချီကာဂို" စတိုင်
နှင်းဆီပန်း၏မင်္ဂလာဆောင်ပန်းစည်း - tulips နှငျ့အခွားသောပန်းပွင့်ရဲ့အလှဆုံးရေးစပ်သီ
Samsa အဘို့မုန့်စိမ်း - ဦးဇျဘစာရွက်
Colchicum ညှိုးနွမ်း - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
Avril Lavigne နဲ့ချဒ် Kroeger
အသုံးဝင်သော Linden လက်ဖက်ရည်ကဘာလဲ?
နံ့သာဆီအနာပျောက်စေနိုင်သောအနာ - တစ်ဦးအမြန်အကျိုးသက်ရောက်မှု
သကြားနှင့်အတူ mashed Currant - အရှိဆုံးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများချိုမြိန်ခြင်းနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေကွက်လပ်
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Hugh Hefner Crystal Harris က၏မုဆိုးမသေခံတော်မူအပေါ် commented
Sangria 15 နွေရာသီဗားရှင်း